That's so good, right?: November 2014
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တခုသော မြို့နယ်ထဲက ရထားလမ်းနဲ့ အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ကွန်ကရစ်လမ်းလေးဘေးမှာ ကိုတိုးတိုး တယောက်တည်း မတ်တတ်ရပ်နေတယ်။ အချိန်ကလည်း ညနေစောင်း မှောင်ရီဝိုးတဝါး ဖြစ်နေပြီ။ ဒီလမ်းထဲမှာ ဈေးသည် တချို့ကလည်း ဈေးသိမ်းပြီးလို့ လူတွေလည်း ပြတ်စပြုနေပြီ။
ကိုတိုးတိုး ဝတ်စားထားတာက ဂျင်းဘောင်းဘီ အတို၊ တီရှပ်အင်္ကျီ လက်တို ဖြစ်နေပေမယ့်၊ သူ့ဟန်ပန်၊ သူ့အမူအရာ တွေက မိန်းကလေးတဦးလို သွားလာ၊ လှုပ်ရှားနေတာကို တွေ့ရတယ်။
Posted by Alex Aung at 8:26 PM No comments:
ဒီနေ့ကိုတော့ ကျွန်တော် မှတ်မှတ်ရရကိုရှိနေတော့မှာ။ စူးရှတောက်ပနေတဲ့ အပူရှိန်တွေဟာ နေမင်းကြီးဆီကနေ ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်ကို ခုန်ဆင်းနေသည့်အလားပါပဲ။ ပခုံးတစ်ဝိုက် ဝေ့၀ဲနေသော အညိုရင့်ရောင်ဆံနွယ်တွေဟာ ချွေးတွေကြောင့်စိုရွှဲနေသလို နဖူးပြင်ကစီးကျ နေသော ချွေးတွေက ကျွန်တော်သုတ်လို့မနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ ဖက်ရှင်တွေလည်းမလန်းနိုင်ဘူးဟိုကွက် သည်ကွက်နဲ့စိုနေပြီ။
‘ဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူး ပူလိုက်တာ’ ကိုယ့်ဖာသာအတွေးဝင်မိတာပါ။ မေလနှောင်းပိုင်းပဲရောက်နေပြီ ဆဟာရသဲကန္တာရ အလယ်ခေါင်တည့်တည့်ရောက်နေရတဲ့အတိုင်းကိုခံစားရတယ်။ သွားနေကျ ရေကူးကန်က ရာသီဥတုပူလို့ဆိုပြီး ခပ်စောစောလေး ဖွင့်ရင်ကောင်းမှာ။ ကျွန်တော်က ရေကူးရတာကိုကြိုက်တယ်ဗျ ကိုယ်ခန္ဓာကို အဆီမကပ်စေသလို abs တွေလည်းမိုက် ကျောပြင်က လည်း V shape ဖြစ် လက်မောင်းဆုံသားတွေလည်းထွားဆိုတော့ ကောင်မလေးတွေ အငေးသားဖြစ်မှာသေချာတယ်လေ။ ဘောလုံး ကစားတာကလည်း မိုက်တော့မိုက်ပေမယ့် ရေကူးအားကစားလောက်တော့ မကြိုက်လှပါဘူး။
အိုး…..လေပြေလေးတွေ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ရုတ်တရက်ဆိုသလို အေးခနဲဖြတ်သန်းသွားတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်နာမည် ကို အားကစားနည်းပြရဲ့အော်ဟစ်လိုက်သံကို ကြားလိုက်ရပါရော။
‘ဟေး….ကစားပွဲမှာ အာရုံစိုက်စမ်း ညီဇော်’ သူ့အော်ဟစ်လိုက်သံကိုထပ်မံကြားလိုက်ရပါရဲ့။ နည်းပြ နှုတ်ဖျားဝယ် အမြုပ်တစီစီတောင် ထွက်နေပြီလားမသိဘူး။ ကျွန်တော် စိတ်ကူးနဲ့ရူးတဲ့ကိစ္စကြောင့် စိတ်လွတ်သွားမိပြန်ပြီပဲ။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အားကစားပွဲမှာပဲအာရုံစိုက် သင့်တယ် ဆောရီး ဆရာ။
‘နည်းပြကြီး….ကလေးတွေရှေ့မှာ ကျွန်တော့်ကိုအဲ့လိုအော်နဲ့လေဗျာ’ ကျွန်တော် သူ့ကိုစနောက်သည့်သဘောနဲ့ပြန်အော်လိုက်တယ်။ သူ တခြားလူတွေစီ အာရုံစိုက်အလုပ်များနေရာကနေ ကျွန်တော့်ဆီ ဝေ့လာတယ်ခင်ဗျ။ ဒီတော့လည်း ကျွန်တော့်မှာ ကစားပွဲဝယ်ပြန်ပြီး အာရုံစိုက်လိုက်ရတာပေါ့။ PT ချိန်လေးမှာ ကစားကြတာကိုပဲဘာကြောင့်သူ အဲ့လောက် အာရုံစိုက် ဒေါဖောင်းနေမှန်းမသိတတ်ဘူး။ တကယ့်ပြိုင်ပွဲကွင်းထဲဝယ် ကျွန်တော်ရောက်ရှိကစားရရင်တော့ ဘယ်လိုနေမယ် မသိတော့ပါ။
‘ကောင်လေး….မင်းပါးစပ်ကိုပိတ်လိုက်တာကပိုကောင်းမယ်….မဟုတ်ရင် နောက်တစ်ချိန်လုံးကွင်းပတ်ပြေးခိုင်းလိုက်မှာနော်’ သူက ပြန်အော်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က သူပြောတာကို မကြားသယောင်ဟန်ဆောင်ပြီးနေလိုက်တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက်အကြာ အထိ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် တစ်ဂိုးမသွင်းနိုင်ကြပါဘူး။ နည်းပြစီက ၀ီစီမှုတ်သံကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ အတန်းစုံက ကျောင်းသားတွေ လည်း zombie တွေလမ်းလျှောက်တဲ့အတိုင်း zombie တွေညည်းညူတဲ့အတိုင်း အ၀တ်လဲခန်းရှိရာစီ ခြေကုန်လက်ပန်းကျလှမ်းဖြစ်ရော။ ကစားဖော်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် နည်းပြရဲ့ ‘နောက်ဆုံး ချွေးတစ်စက်ကျတဲ့အထိမရပ်ရ’ဆိုတဲ့ စကားသံနဲ့အသားကျနေပါပြီ။ အ၀တ်လဲခန်းထဲ ခုန်ဆွခုန်ဆွနဲ့ပြန်လာတဲ့လူရှိသလို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တွန်းထိုးပြီးပြန်လာကြတာလဲရှိပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သက်ပြင်းကိုယ်စီချဖြစ်ကြတာတော့အမှန်ပါပဲ။
အဆောက်အဦးဝင်ပေါက်ထဲလဲ ဖြတ်ကရော အေးမြတဲ့လေတွေက ထွေးပွေ့ကြိုဆိုကြပါ တယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကိုယ်စီဝတ်ထားတဲ့ ရှပ်အကျ င်္ီ၊ ခြေအိတ်အစုံ၊ ဘောင်းဘီတိုတွေ ဆွဲချွတ်တဲ့ပြီး အ၀တ်လဲခန်းတွေရှိရာကို ဟောလ်ခန်းထဲကနေအပြေးလေးလှမ်းဖြစ်ကြပါရဲ့။
ကျွန်တော်သည်လည်း ချွေးတွေရွှဲနေသော ကိုယ်ပေါ်ကအ၀တ်တွေကိုစတင်ချွတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘီရို locker ထဲပစ်ထည့် လိုက်တယ်။ ဘီရိုထဲ ဟိုသည်ငုံ့ကိုင်းကြည့်မိပါသေးတယ်…အ၀တ်အနည်းငယ်၊ ပိုက်ဆံနည်းနည်းနဲ့ တခြားတိုလီမိုလီလေးတွေတော့ ထည့်ထားတာပေါ့။ ဒီလိုဘီရိုလေးတွေထဲ ပစ္စည်းအကြီးစားတွေပါထည့်သိမ်းတတ်တဲ့သူတချို့ကိုအံ့သြမိပါရဲ့။ ဘောင်းဘီတိုအပိုလေး တွေ၊ ရှပ်အကျ င်္ီ၊ ခြေအိတ်တွေစသဖြင့်ထည့်သိမ်းတာကိုတော့ထားပါ။ အတန်းပေါင်းစုံကကျောင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဘောလုံး အသင်းလေးရဲ့ မန်နေဂျာက အကြောင်းပြချက်အချို့နဲ့နှုတ်ထွက်သွားတာမကြာသေးပါဘူး။ သူက အသင်းသားတွေရဲ့လဲထားတဲ့ အ၀တ်အစားတွေကို လျှော်ဖွတ်ထားပေးတဲ့ကိစ္စကိုအမြဲတာဝန်ယူတတ်တယ် ပြီးတော့ သန့်ရှင်းတဲ့အ၀တ်လေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ ၀တ်ဆင်ထားရင် အရမ်းသဘောကျတာ။ အိမ်က မာမီကလည်း အလုပ်များ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမလျှော်ချင်ဆိုတော့ မန်နေဂျာ လုပ်ရပ်နဲ့က အဆင်ကိုပြေနေခဲ့တာလေ။
နောက်ဆုံး ကျွန်တော့်ဘီရိုလေးထဲကဟာတွေ နေသားတကျလုပ်ပြီး သော့ခတ်လိုက်တာ အလျင်စလိုနိုင်သွားတာကြောင့် တဘက်က ဘီရိုအတွင်းထဲမှာ မေ့ကျန်ပါရော။
‘အာ…သွားပြီ’ ကျွန်တော်ခပ်တိုးတိုးရေရွတ်မိပါတယ် အတွင်းခံခပ်ပါးပါးတစ်ထည်ကိုဝတ်ရင်း တဘက်မပါ ဗလာကိုယ်တည်း။
‘ဟေး…ပိုင်ပိုင် …မင်းမှာ တဘက်အပိုတစ်ထည်လောက်ရှိလား?’ ရေချိုးခန်းကိုလှမ်းနေတဲ့ ပိုင်ပိုင့်ကိုလှမ်းမေးလိုက်တယ်။
‘ရှိဘူးကွ….အရင် Locker ကိုသုံးသွားတဲ့ မင်းဇော်ချန်ထားရစ်ခဲ့တဲ့ တဘက်ကိုငါလျှော်ပြီးသုံးနေတာ’
‘ဆိုးတာကွာ….ငါ တဘက်ကို Locker ထဲထည့်ပြီးပိတ်လိုက်မိလို့။ ပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်တော့ ပြည့်သိပ်နေအောင်ထည့်ထားတဲ့ ငါ့ပစ္စည်းတွေ အကုန်ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျကုန်မှာကွ။ အဲ့တာဆို မင်းရေချိုးပြီးရင် တဘက်ကို ခဏငှားကွာနော်?’ ကျွန်တော်တော့သွားပြီ အေးစက်နေတဲ့ လေတွေလွင့်နေတဲ့ အခန်းထဲမှာ အ၀တ်မပါ မိနစ်အတော်ကြာကြာ ဘယ်လိုရပ်နေရမလဲမသိတော့ပါဘူး။
‘အာ…မဖြစ်ဘူးလေကွာ…ရေချိုးပြီးငါ အဲ့တဘက်လေးပတ်ထွက်လာမှာ။ ပြီးတော့ မင်းလမွှေးတွေ ငါ့တဘက်ကပ်ကုန်မှာပေါ့ဟ ငှားဘူး ဟာ ဟ’ ပိုင်ပိုင်က ရယ်သွမ်းသွေးလေရဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ဟာသမမြောက်နိုင်ဘူး စိတ်ညစ်သွားမိပါတယ်။
‘Fuck….ရတယ်ကွာ…ကျွတ်…ငါ ပီတာတဘက်ကိုသွားယူသုံးတော့မယ် သူဒီနေ့မလာဘူး’ ကျွန်တော် ပီတာရဲ့ ဘီရို Locker ရှိရာကိုသွားပြီး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ပီတာက အမြဲတစေ သူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ဒီထဲထည့်ပြီးသိမ်းတတ်တာလေ။ ပီတာက အသင်းမှာ တိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်လို ကစားတာကျွမ်းတယ်ဗျ။ အာ ဟာ….ဘာတွေလည်းမသိဘူးထည့်ထားတာ။
‘ဘော်ဒါ…..ပီတာက သူ့ပစ္စည်းတွေကိုင်တာ ယူသုံးတာမကြိုက်ဘူးနော် အဲဒါမင်းသိတယ်မလား?’ ပိုင်ပိုင်ကပြောသေးတယ်။
‘ငါ့ကောင်….ထားလိုက်စမ်းပါကွာ….ဒါ weekend ကွ။
ငါသုံးပြီးရင် လျှော်တဲ့သူကိုပေးလိုက်မယ်။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ပါတ်မတိုင်ခင် ပြန်ရမယ်လေ။ အဲ့ဒီအခါကျရင် ပီတာ locker ထဲပြန်ထည့်လိုက်မှာပေါ့ကွ။ သူ သိမှာတောင်မဟုတ်ဘူး’ ကျွန်တော်သူ့ကိုမကြည့်ဘဲ ပြောလိုက်တယ်။ ပြန်စောင်းငဲ့ကြည့်တော့ ပိုင်ပိုင်က ကျွန်တော့်ကို အထင်သေးတဲ့အကြည့်တစ်ချက်ပေးပြီး ရေချိုးခန်းရှိရာကိုထွက်သွား ပါရော။
တံခါးရွက်လေးကိုဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ ၀ိုး…ပီတာက တကယ့်ငနဲပဲဗျ။ ပစ္စည်းတွေကို တကယ့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထည့်ထားတာ။ သူ့နေရာနဲ့သူ လိုအပ်တာလေးတွေ အံကျ။
တွေ့ပြီ…locker အပေါ်ပိုင်းမှာ တဘက်ကို အသာခေါက်ပြီးထပ်တင်ထားတာ။ ကျွန်တော် တဘက်ကိုအသာခြေကြွပြီး လှမ်းဆွဲယူတာမှာ မဂ္ဂဇင်းတွေ ဗြုန်းဆိုကျလာရော။
‘Jesus…ပီတာ…ဘာတွေလဲ နာလိုက်တာ’ နာကျင်သွားရတဲ့ ကျွန်တော့်နဖူးပြင်ကိုအသာပွတ်ရင်း မဂ္ဂဇင်းအချို့ကိုကောက်ယူလိုက် ပါတယ်။
‘Oh…My…ပီတာ…ဟီး ဟီး’ ပီတာကြီးက Porn Magazine တွေကို ဒီမှာလာဖွက်ထားတာပဲ။ အစက မဂ္ဂဇင်းဟောင်းတွေကို ဒီကောင် ဘာလို့ တချိန်လုံး ဒီထဲထည့်ထည့်နေတာလဲလို့ထင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ပီတာမိဘတွေက အတော်စည်းကမ်းတင်းကြပ်တယ်ဆိုတာ သတိရမိသွားတယ်။ဒီကောင် အွန်လိုင်းမှာလည်းကြည့်ရင်ရသားနဲ့။ အင်း….ပီတာကြီးက Smart ကျလိုက်တာ ပုံမှန်မြင်တွေ့နေကျတာနဲ့ ကိုမတူဘူး။ ဒီလို ပစ္စည်းပစ္စယတွေ ကျောင်းမှာထားတာက နည်းနည်းတော့ ရန်များတယ်။ ကျွန်တော့်လို လူမျိုးမဟုတ်ဘဲ တခြားကောင်သာတွေ့သွားလို့ ကတော့ ဒီကောင် နည်းပြစီအတိုင်ခံရပြီမှတ်။
ကျွန်တော် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ကျသွားတဲ့မဂ္ဂဇင်းအချို့ကိုစကောက်လိုက်ပါတယ်။ အမြန်နှုန်းနဲ့ နည်းနည်းလှန်လှောကြည့်မိတော့ ရင်သားထွားထွား အမျိုးသမီးတွေ….အားလုံး အထွားဆိုဒ်တွေကြီးပဲ။ခပ်ပါးပါးအတွင်းခံထဲက ကျွန်တော့်ညီဘွားခမျာ ခေါင်းထောင်ထစ ပြုပြီး အတင်းရုန်းထွက်လာရော။ ဒါပေမဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက် အ၀တ်လဲခန်းထဲဝင်လာတာကိုသတိပြုမိရသလို နည်းပြရဲ့အသံကလည်း အခန်းထဲမှာ ပဲ့တင်သံကိုထပ်ပြီပေါ့။ ခပ်သွက်သွက်ကောက်လိုက်ပြီး locker လေးထဲအမြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတစ်အုပ်ကိုထည့်သောအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော့်လက်တွေ အနည်းငယ်ရပ်တန့်သွားပါရဲ့။ ဒီတစ်အုပ်ကတော့ အခြားစာအုပ် တွေနဲ့မတူပါဘူး။ မျက်နှာဖုံးမှာ ရင်သားထွားထွားအမျိုးသမီးအချို့ရဲ့ပုံတွေအပြင် နပန်းသမားအသွင်အပြင်နဲ့ ငနဲအချို့ရဲ့ပုံတွေကိုလည်း တင်ထားတယ်။ ဒါ နပန်းမဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာပေါ့ အတွင်းထဲမှာ နပန်းနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးတွေ လည်းမပါ များသောအားဖြင့်လိင်ကိစ္စအကြောင်းပြောထားတာတွေကြီးပဲ။ သိချင်စိတ်ပြင်းပြလာတာနဲ့ ခပ်မြန်မြန်ဟိုသည်လှန်လှောကြည့် မိလိုက်တော့ အ၀တ်မပါသော အမျိုးသားတွေရဲ့ကိုယ်ဟန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံတွေပါနေတယ်။ တစ်ပုံမှာတော့ အသား ခပ်ညိုညို၊ ပေါင်ခြံမှာလှဲလှောင်းနေတဲ့ ငပဲကြီးကြီးပိုင်ရှင်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါရော။
ကျွန်တော့်မှာအဲ့ဒီဓာတ်ပုံကိုမြင်ပြီး ကြက်သေသေနေမိခဲ့ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပါတဲ့စာမျက်နှာမှာ အခြားသောဓာတ်ပုံတွေရောရောထွေးထွေး မရှိဘူးဗျ ကျားသစ်သားရေပေါ်မှာ ကားယားထိုင်နေတာလေ။ ကျွန်တော့်နံဘေးနားက locker တံခါးကိုဖွင့်ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်သံကြောင့် မဂ္ဂဇင်းကို အတွင်းထဲပစ်ထည့်ကာပိတ်လိုက်တယ် locker ကို။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေဘာဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိဘူး ယောင်နနနဲ့။ ပီတာရဲ့ မဂ္ဂဇင်းထဲက အ၀တ်မဲ့အမျိုးသားဓာတ်ပုံတွေကိုဖွင့်ကြည့်မြင်ရတဲ့ ခဏ ရွှံရှာစွာ ပစ်ထည့်လိုက်ရမှာကို ဖွင့်ကြည့်နေမိခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးဗျာ။ ကျွန်တော် ပိုင်ပိုင်ရှိရာ ရေချိုးခန်းရှိရာကို ခပ်သွက်သွက်လှမ်းသွားလိုက်တယ် ဒီအချိန်ဆိုရင် သူရေချိုးပြီး လောက်ပြီ။ အဲ့ကောင်စီက ရေချိုးဆပ်ပြာရည် ခပ်မွှေးမွှေးလေးရနေတော့မှာ။
‘Jeez ညီဇော်….မင်း တဘက်ကို ခါးမှာမြဲမြဲပတ်ထားဦးဟ ဟီးဟီး’ သူ တဟီးဟီးရယ်ပြီးပြောတယ်ဗျ။ သူ ကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာခြင်းဆိုင် လှမ်းထွက်လာရာကနေပြောတာလေ။
‘ဘာဖြစ်လို့လဲ ပိုင်..ပိုင်’ ကျွန်တော်စကားစပြောရင်း သူ့မျက်လုံးအကြည့်ရောက်ရာ ကိုယ့်အောက်ပိုင်းကိုယ်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ ညီဘွားက တဘက်ထဲကနေ အတင်းကုန်းရုန်းထနေတာက သိသိသာသာကိုး။
ပီတာ့တဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ပတ်လိုက်မိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ရုပ်ပျက်သွားလည်းမသိဘူး ဟို အ၀တ်မပါတဲ့အမျိုးသားရဲ့ ဓာတ်ပုံကြောင့်လား? ကျွန်တော်ခေါင်းရှုပ်စွာ ရေပန်းအောက်ဝင်လိုက်ပြီး ဆပ်ပြာရည်တွေဖွှားဖွှားပါအောင်တိုက်ပြီး ကျွန်တော်ဟာဘာလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ချိန်ရောက်နေသလား စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဘောလုံးကစားဖော်ကစားဖက် အတော်များများရေချိုးခန်း အ၀တ်လဲခန်း ၀င်ကြတဲ့အခါ သူတို့အ၀တ်မဲ့နေတာကို မကြာခဏမြင်ဖူးနေကြပဲဟာ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အရွယ်ကျောင်းသားတွေဆိုတာက သေချာ လေ့ကျင့်ရွေးချယ်ထားသူများလောက်တော့ မမိုက်ဘူးထင်တယ်။
ကျွန်တော် သတ်မှတ်ချိန်အတိုင်း ရေကိုအပြီးချိုးကာ ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပြီးနောက် ပီတာ တဘက်ကို အ၀တ်လျှော်ရန်ခြင်းထဲ နာမည် တံဆိပ်လေးရေးကပ်ပြီးထည့်ထားလိုက်တယ်။ တံခါးစောင့်က သူစိတ်မလိုရင် သော့ခတ်ပြီး ကျောင်းဝင်းထဲလျှောက်သွားနေ တတ်တာကြောင့် ခပ်သွက်သွက်လေး အ၀တ်ကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်ဆင်လိုက်ပြီး အ၀တ်လဲခန်းထဲကနေ ခန်းမထဲကိုလှမ်းလိုက်တာ ပေါ့နော်။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ထောင့်ချိုးကိုအကွေ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို တိုက်မိမလိုဖြစ်လို့အမြန်လျှောင်လိုက်ရတယ်။ သူ့ကို ခပ်မြန်မြန်လေး တောင်းပန်စကားဆိုရတာပေါ့ဗျာ။
‘အိုး….ဆောရီး ဘော်ဒါ!’ ပြဿနာမဖြစ်ဘူးမျှော်လင့်ရတာပါပဲ လေသံတော့ပျော့ပြီးပြောလိုက်တယ်။
‘ရုတ်တရက် သတိမထားမိသလိုဖြစ်သွားတာ….ကျွန်တော် အလျင်လိုနေတာကြောင့်ပါ’
‘ဟေး….မင်းနာသွားတာလား’ သူ ကျွန်တော့်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောတဲ့စကားမဆုံးမီမှာပဲ ဖြတ်မေးလိုက်တယ်။
‘ငါ့ကောင်….ငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဟ….ဒါပေမယ့် ဖင်ထိုင်ရက်လဲကျအောင်လုပ်သလိုဖြစ်သွားတယ် ထူပေးပါလား’
‘ဆောရီးဗျာ…’ ကျွန်တော် နောက်တစ်ကြိမ်တောင်းပန်လိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ဖင်ထိုင်ရက်ကျနေတဲ့သူ ထနိုင်အောင် လက်မောင်းကနေ အသာဖေးကိုင်ပြီးဆွဲထူလိုက်တယ်။
‘ကျေးဇူးပဲ’ သူတခြားသောစကားတွေ ဆက်မပြောနိုင်ခင်မှာပဲ ခေါင်းကိုအသာဆတ်ပြလိုက်ကာ ကျွန်တော်အမြန်ထွက်လာလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်သာ ခပ်မြန်မြန် မပြေးရင် အတန်းချိန်နောက်ကျတော့မှာလေ နံရံမှာကပ်ထားတဲ့နာရီက အချိန်သိပ်မလိုတော့ကြောင်းပြနေတာ ကိုး။
အလျင်လိုနေတဲ့ကိုယ်အရှိန်သပ်ပြီး အတန်းအခန်းတံခါးလက်ကိုင်ကိုကိုင်ကာ ခဏတော့ငြိမ်လိုက်သေးတယ်။ ပြီးမှာ တံခါးကိုဖွင့်ပြီးဝင် သွားတော့ မျက်လုံးအချို့ရဲ့လှည့်ကြည့်မှုကိုခံလိုက်ရပါသေးရဲ့။
‘ဟေး…အိမ်စာတွေလုပ်ခဲ့လား မေမီ?’ ကျွန်တော့်ကိုလှည့်ကြည့်တဲ့ကောင်မလေးတွေထဲက မျက်မှန်းတန်းမိနေကြ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကို လှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
‘အတော်ပဲ ပြစရာတွေရှိတယ် Mr. ခေါင်ချုပ်’ မေမီနဲ့ တစ်ခုံတည်းထိုင်နေတဲ့ ယုဇနက လှမ်းပြောတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်က စားပွဲခုံတစ်ခုံဝယ် ဟိုဘက်သည်ဘက်မျက်နှာချင်းဆိုင်အတူထိုင်ခဲ့သောကောင်မလေး။ ကျွန်တော်က လောလောဆယ် ကျွန်တော်တို့ senior year ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရတာပါ။ ယုဇနက ကုန်လွန်ခဲ့သော လေးနှစ်တာကာလအခြေအနေအပေါ် အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးတစ်ရပ်အဖြစ် သိနေလို့ထင်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်လောက်က ကျွန်တော်ဟာ သူမအတွက် အခိုင်းအစေသာသာ အပေါင်းအသင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသေးတယ်လေ။ သူမဘာလိုအပ်လဲ ဘာလုပ်ချင်လဲ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်ပဲ လုပ်ပေးခဲ့ရတာ။ ကျွန်တော် သူ့ကိုတွန်းထိုးစကားများပြီးနောက်မှာမှ အခေါ်အပြောသိပ်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘူး။
အဲ့ကိစ္စကအမှန်တကယ်တော့ သူမရဲ့အမူအကျင့်ကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ လူတိုင်းအပေါ် သူမက လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့သွေးနထင်ရောက် နေတတ်တာကိုး။
ကဲစာသင်ချိန်လည်းပြီးရော ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးအောင်ဟိန်းရဲ့အခန်းထဲဝယ် အစည်းအဝေးသဘော ပြုလုပ် ကြပါတယ်။
‘ငါ လက်တွေ့ခန်းထဲရောက်နေရသလိုပဲ အနံ့အသက်က ၀က်နံ့ထွက်နေတယ်….နင်လည်းငါနဲ့ရှိချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေ’ စာရွက်တွေ ကိုကောက်စီလိုက်ပြီး စားပွဲခုံအစွန်းကို ကျွန်တော်တိုးရွှေ့ထိုင်လိုက်ကာ ယုဇနကို မကြားတကြားပြောလိုက်ပါတယ်။
‘သေချာတာပေါ့….နင့်လို လူဝံလိုလို လူလိုလိုကောင်ထက်စာရင် အနံ့အသက်ကောင်းပါသေးတယ်’ သူမက ပြန်တုန့်ပြန်တယ်။
‘ကဲ..တော်ပြီ မင်းတို့နှစ်ယောက်ကတွေ့လိုက်ရင် ဒီအတိုင်းကြီးပဲ ကလေးတွေလည်းမဟုတ်ကြတော့ဘူး’ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ အကြံပေး ဦးအောင်ဟိန်းက ကြားဖြတ်ပြောလိုက်တော့မှ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သား အကြည့်စူးစူးတွေပေးပြီးငြိမ်သက်သွားကြ တာပေါ့။
‘ဟုတ်ပြီ ကျော်ဇော ခဏနေကဖတ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်ဖတ်ပြပါလား’
ကျွန်တော့်ရှေ့ကအစီအစဉ်စာရွက်အချို့ကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး ပြန်ဆွေးနွေးဖို့ ကျော်ဇောကို အစပျိုးလိုက်တယ်။ ကျော်ဇောဆိုတာ အတွင်းရေးမှူးအသစ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသူ တစ်ယောက်လေ။ သူဖတ်ပြတာလေးတွေကို နားထောင်ပြီး စာရွက်ပေါ်မှ အကြောင်းအရာတွေကို လိုက်ဖတ်လိုက်တယ်။ သူစာဖတ်ပြ တဲ့အသံလေးက မိုက်တယ်ဗျ ချိုချိုသာသာနဲ့ နားထောင်လို့ကောင်းသလို မျက်နှာအမူအယာလေးတွေကလည်း တစ်ချက်တစ်ချက် ငေးစရာပါ။ သူ့နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေက ပန်းသွေးရောင်တောက်နေပြီး ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေလို ခပ်ထူထူမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ သူဘာတွေ ဖတ်ပြနေတယ်ဆိုတာကို အာရုံစိုက်လို့မရတော့ဘူးဗျာ သူ့နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့်ဗိုက်သားပြင်ပေါ်ကိုပွတ်ဆွဲပြီး ကျွန်တော့် ညီ ဘွားကို…နမ်း….အ
‘ညီဇော်!!’ ယုဇန အော်သံကိုကြားလိုက်ရမှ အတွေးရပ်သွားရပါတယ်။
‘နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ ညီဇော်…အတိတ်မေ့သွားတာတို့ ရွှေခွက်ပျောက်တာတို့တော့မဟုတ်ပါဘူးနော်? ဦးအောင်ဟိန်းက ပန်းစည်းတွေ ရမယ့်နေ့ကိုမေးနေတယ် ဘယ်ရက်လောက်ဖြစ်မလဲတဲ့’
Fuck…အစည်းအဝေးလုပ်နေရက်သားနဲ့ ဘာကြောင့်များ ကျောဇောအကြောင်း စိတ်ကူးယဉ်သွားမိပါလိမ့်? ကျွန်တော် ခေါင်းကိုအသာ ခါယမ်းလိုက်ကာ ခေါင်းရှင်းလိုက်ပါတယ်။
‘အေး…အာ..’ ကျွန်တော် ပန်းစည်းရမယ့်ရက်စွဲကို မှတ်မိမလား အမြန်စဉ်းစားလိုက်မိပါရဲ့။ ‘အဲ လေးရက်လောက်လိုဦးမယ်ထင်တယ်…. Senior အသင်းဝင်တွေတက်နိုင်လောက်မယ့် graduation ceremony မရောက်ခင် ရက်နည်းနည်းလောက်အလိုပေါ့နော်’
ယုဇန ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်နေရော။ ကျွန်တော်ဘာတွေအမှားလုပ်မလဲ သူမ ထောက်ပြဖို့အကြောင်းရှာနေဟန်တူတယ်ဗျ။ ဒါပေမဲ့ သူမ သိပ်မရှာနိုင်တော့ပါဘူး ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော်လက်မှာပတ်ထားသောနာရီကိုငုံ့ကြည့်ပြီး စကားစဖြတ်လိုက်တာကြောင့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ အခြားသော အကြောင်းအရာအချို့ကို ဆက်ဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါတယ် အစည်းအဝေးလုပ်နေတာကို ကျွန်တော် မရပ်ဆိုင်း ခင်အထိပေါ့။ ကျွန်တော့် ကျောပိုးအိတ်ကိုဆွဲယူပြီး တံခါးမဆီ ခြေအလှမ်းမှာ ဦးအောင်ဟိန်း ခေါ်သံကြောင့် သူ့စားပွဲရှိရာကို သွားလိုက်ပါ တယ်။
‘ဘာဖြစ်လို့လဲ ဦး’ ကျွန်တော်သူ့စားပွဲခုံရှေ့မှာခဏထိုင်ပြီးမှ မေးလိုက်တယ်။ သူမကြိုက်တာကို ကျွန်တော်လုပ်လို့ပြောမည့်ဟန်လုပ်ပြီး မှ ကျွန်တော့်ကို တားမရမှန်းသူသိသွားတယ်ထင်တယ်။
‘မင်း နေကောကောင်းရဲ့လား? မင်းကြည့်ရတာ အစည်းအဝေးလုပ်နေတာကို စိတ်မပါသလိုပဲ’ လို့လေသံခပ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ပြောရော။
ကျွန်တော့်အတွေးထဲမှာ အ၀တ်လဲခန်းထဲကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေရယ် ပြီးတော့ ကျော်ဇောအကြောင်းတွေကြောင့် မဆီမဆိုင်ဖြစ်ပျက် နေသလားလို့တွေးမိပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လဲတော့ ကျွန်တော်မသိသေးဘူး ဒါပေမဲ့ ဦးအောင်ဟိန်းကို စိတ်ခုစရာဖြစ်အောင် လုပ်မိနေတယ်နဲ့တူတယ်။ သူက ချက်ဆိုနားခွက်ကမီးတောက်တဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ပါ ဒါပေမဲ့ သူနားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေ….။
‘ဟုတ် နေကောင်းပါတယ် ဦး။ နောက်တစ်ပါတ်မှာ အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ပါ့မယ်’
သူ ကျွန်တော့်ကိုထူးခြားတဲ့အကြည့်တစ်ချက် ပေးပြီးနောက် ‘Okay…နောက်တစ်ပတ်မှတွေ့ကြသေးတာပေါ့’ လို့နှုတ်ဆက်တယ်။
ကျွန်တော်အပြင်ကိုလျှောက်လှမ်းထွက်လာတော့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတစ်ယောက်မှမတွေ့ရတော့ဘူး။ လူတိုင်း weekend ဆိုတော့ အိမ်ပြန်ကြတာဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစည်းအဝေးလုပ်တာက နည်းနည်းတော့ ပုံမှန်သဘောမျိုးလုပ်နေကြဆိုတော့ လူမရှိတာ အံ့သြ မနေတော့ပါဘူး။
ကျွန်တော်ကားပေါ်ရောက်တော့ စာအုပ်တွေ ကျောပိုးအိတ်တွေကို နောက်ခန်းပို့ပြီးနောက် ကျောင်းသားတွေကားထားတဲ့ ကားပါကင်က နေ အသာမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် လမ်းမကြီးပေါ်ကို ချိုးအကွေ့မှာတော့ ကားမှတ်တိုင်ဝယ် လူတစ်ယောက် ကားစောင့် နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ နည်းနည်းလေးနီးလာတော့ ကျောင်းခန်းမထဲမှာ ဒီနေ့ တိုက်မိမလိုဖြစ်သေးတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရပါရဲ့။ ကျွန်တော်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နားမောင်းသွားပြီး ရပ်လိုက်တယ်။ သူ တစ်ချက်လောက် ကျွန်တော့်ကိုမော့ကြည့် ပြီးနောက် သူ့လက်ထဲကဖုန်းမျက်နှာပြင်ကိုပဲပြန်အာရုံစိုက်အလုပ်များနေရော။
‘ဟေ့…မြို့ထဲပြန်မှာ ကားကြုံလိုက်ခဲ့မလား?’ ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘဲမေးလိုက်မိတယ်။ အပြင်ဘက်မှာက ရာသီ ဥတုကပူပြင်းနေတော့ ကျွန်တော်သာဆို ဘတ်စ်တစ်စင်းလာဖို့ ထိုင်စောင့်မနေနိုင်ဘူး။
‘ရပါတယ်…..ငါ ဘတ်စ်စီးပြီးတော့အိမ်ပြန်မှာကွ’ သူ ကျွန်တော့်ကိုမော့မကြည့်ဘဲနဲ့ဖြေတယ်။
‘ဘတ်စ်ကားက နှစ်နာရီ သုံးနာရီလောက်မှတစ်စင်းလောက်လာတာလေကွာ… ဒီအတိုင်းဆို မင်း မီးကင်ထားသလိုဖြစ်နေမယ် ရာသီဥတုက ဒီလောက်ပူတာ’
သူ ကျွန်တော့်ကိုမော့ကြည့်ပြီး တစ်ချက်တော့စိုက်ကြည့်သေးတယ်။ ပြီးတော့မှ ဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်တူတယ် သူ့လွယ်အိတ်ကိုဆွဲယူပြီး ကျွန်တော့်ကားရှိရာကိုလှမ်းလာတယ်။ သူ့ကိုကျွန်တော်ပြုံးပြလိုက်တော့ သူ ကျွန်တော့်ကိုအကြည့်စူးစူးတစ်ချက်ပေးရော။
‘မင်း ဘာလို့ပြုံးတာလဲ?’ သူမေးတယ်ဗျ။ သူ ကျောင်းကပြန်ဖို့ ဘတ်စ်ကိုအကြာကြီးစောင့်ရတာထက် ကျွန်တော့်ကားကိုကားကြုံစီးရမှာ လေသံနည်းနည်းလေးတော့ လျော့သင့်တယ်ထင်တာပဲ။
‘အာ…ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး’ ကျွန်တော့်လက်တစ်ဖက်ကို ကမ်းလိုက်ပြီး ‘ငါ့နာမည်က ညီ…’
‘အင်….မင်းနာမည်ကို ငါသိပါတယ်။ ကျောင်းမှာ မင်းနာမည်ကို မသိတဲ့သူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူး’ ကျွန်တော့်စကားကိုဖြတ်ပြီး သူပြောတယ်။
‘အော်…ဟုတ်လား’ ကျွန်တော် သူ့နာမည်ပြန်ပြောဦးမလားလို့ ခဏတော့စောင့်နေမိသေးတယ် ဒါပေမဲ့မပြောပြဘူး။ ‘ကောင်းပြီလေ… မင်းအိမ်လိပ်စာကိုပြောဦးမှပေါ့ အဲဒါမှ ငါမင်းအိမ်ကိုလိုက်ပို့လို့ရမှာဗျ’
သူ့မျက်နှာက လှောင်တဲ့အသွင်နဲ့ ကျွန်တော့်ကို အိမ်လိပ်စာတစ်ခုပြောပြတယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့အိမ်ရှိရာကို မောင်းထွက်ခဲ့ရ တော့တာပေါ့နော်။ ကျွန်တော်သူ့ကိုစကားစမြည်အချို့ပြောဖို့တော့ကြိုးစားပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ တုံဏှိဘာဝေ ခပ်ဆိတ်ဆိတ်ဆက်ဆံ ပြောဆိုတတ်သလိုဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်လည်း အရှုံးပေးပြီး ကားရေဒီယိုကိုဖွင့်ကာ သီချင်းနားထောင်ပြီးသာ မောင်းလိုက်ပါတော့ တယ်။
သူတို့အိမ်ရှေ့ကိုလည်းအရောက် ကားစက်သပ်လိုက်ပြီးနောက် ‘မင်းပြောတဲ့လိပ်စာအတိုင်းတော့ရောက်ပြီ…ကျောင်းကနေ ဘတ်စ် စီးပြီးပြန်မယ်ဆိုရင် မင်းတော်တော်ကြာအောင်စောင့်နေရဦးမှာနော်’ လို့ကျွန်တော်ပြောမိလိုက်တယ်။
‘ဟုတ်တယ်လေ…အဲ့ဒီတော့ မင်းဘာလိုချင်လို့လဲ?’ သူ ကားထဲကမထွက်ခင် စကားတစ်ခွန်းတော့ပြန်ပြောပါတယ်။
‘မင်း -ီးကို -ုပ်ပေးရမလား? မင်း -ဥကို လျက်ပေးရမှာလား? ဒါမှမဟုတ် -င်ခံပေးရမလား မင်းကို?’
‘Wow!! ဖြေးဖြေးပြောပါ ဘော်ဒါရ။ တစ်ခုမှ ငါမလုပ်ချင်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ ငါတစ်ခါမှ အတွေ့အကြုံမရှိဘူး’ ကျွန်တော် နှုတ်ဆွံ့သွားမိတယ်။ ကျွန်တော် ကျောင်းကနေ အိမ်ပြန်ဖို့ ကားကြုံလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တာကို သူနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ ခွင်(ဂွင်) ဖန်တယ်လို့များ သူထင်သွားသလားမသိဘူးဗျာ။
‘အာ ဟာ…ဟုတ်ပါပြီ။ ခင်ဗျားနဲ့ အခြားငနဲတွေလည်း အဲ့လိုအမြဲပြောတာပဲ စော်တွေနဲ့ဘယ်လိုစွံတာ ဘယ်လောက်ပွေးခဲ့တာတွေ။ ပြီးတော့ နောက်ကွယ်လည်းကျရော ငါ့လိုလူတွေကို ဆော်ချင်ပြန်ရော’
ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့တွေဝေသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးကစားဖော်ကစားဖက်တွေထဲက ဘယ်ငနဲတွေကများ ဂေးလို့ သူတို့သိနေတဲ့လူနဲ့ ပျော်ပါးကြပါလိမ့်။ ပြီးတော့ လိင်ဆက်ဆံကြတာဆိုတာ…?
‘နားထောင်…ခင်ဗျား ကျုပ်ကို မချချင်ဘူးဆိုရင် အိမ်ပေါ်တက်တော့မယ်’ သူ ကားပေါ်ကနေစဆင်းဟန်ပြုပြီ။
‘စောင့်ပါဦး!!’ ကျွန်တော် သူ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးတားလိုက်မိတယ်။
‘တွေ့လား ကျူပ်သိပ်ပါတယ် ခင်ဗျားလည်း ချချင်နေတယ်ဆိုတာ။ ခင်ဗျားတို့အသင်းသားငနဲတွေအားလုံးကအဲ့လိုပဲ’ သူ့ဦးခေါင်းကို အသာခါရမ်းပြီးပြောပါတယ်။
‘အာ…အဲ့လိုမဟုတ် မဟုတ်ပါဘူးကွ။ ငါ..ငါက မင်းနဲ့ဘယ်သူတွေပတ်သက်ပြီးပြီလဲ လိင်ဆက်ဆံပြီးပြီလဲ သိချင်ရုံလေးပါ’ သူက ကျွန်တော့်ကို ငထူးပဲဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြန်ရော။ သူ သက်ပျင်းတစ်ခါချလိုက်ပြီးနောက် သူ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတော့တယ်။
ကျွန်တော်လည်း ကားကိုသော့ပိတ်ပြီး သူ့နောက်ကနေ ခပ်သွက်သွက်လိုက်သွားမိပါတယ်။ ကားပါကင်ထဲသွားမထိုးဘဲ သူတို့တိုက်ရှေ့ မှာ ရပ်ထားခဲ့မိပေမယ့် ပြန်ပြင်ဖို့မကြိုးစားဘဲ လိုက်သွားမိတာပါ။ သူ့အိမ်က တော်တော်ကြီးတာပဲဗျ။ ဟိုးနှစ်အတော်ကြာကြာက ဆောက်ခဲ့တဲ့ အိမ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုပါပဲလေ။ အချို့နေရာတွေမှာတောင် ပြင်ဆင်ဖို့လိုနေတာတွေ့ရပေမယ့် အားလုံးခြုံကြည့်ရင် တော်တော် မိုက်ပါတယ်ဗျ။
အတွင်းထဲကိုဝင်လိုက်သွားပြန်တော့ ဗီနီဂါအနံ့ခပ်ပြင်းပြင်းကို ရုတ်တရက် ကျွန်တော့်နှာခေါင်းဝယ် ရှူရှိုက်မိရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်မကြီးထဲ ဦးတည်မသွားကြဘဲ မြေအောက်ခန်းလို အောက်ဖက်နိမ့်သွားတဲ့အခန်းစီ ဦးတည်သွားကြပါရဲ့။ သူ့အခန်းက အပေါ်ထပ် မှာမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။
‘ကျုပ် အမေက ပရိဘောဂတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါ ဗီနီဂါကိုသုံးတာလေ’ သူကရှင်းပြပါတယ်။ ဘာလို့သုံးတာလဲလို့ သူ့ကို ကျွန်တော်မေးမိတော့မလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက သိပ်ပြီးအရေးပါတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာဘဲ။ ဒါကြောင့် သူလှမ်းသွားတဲ့နောက်လိုက်သွား ရပြီး သူ့အခန်းထဲကို လိုက်ဝင်သွားလိုက်ပါတယ်။ သစ်သားဘီရိုခပ်မြင့်မြင့်မှာ သူ့တစ်ကိုယ်ရေအ၀တ်အစားတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ချိတ်ဆွဲ ထားတာကိုတွေ့ရသေးတယ်ဗျ။
‘ဒီ စားပွဲလေးကမိုက်တယ်နော်’ ကျွန်တော် သူ့ခုတင်ဘေးက စားပွဲခုံခပ်ဆန်းဆန်းလေးကိုညွှန်ပြရင်းပြောလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော့် အခန်းက တော်တော်ကြီးတာပါပဲ။ ရေချိုးခန်းပါတယ် အ၀တ်လဲခန်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့အခန်းနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် ကလေးအခန်းနဲ့ လူကြီးအခန်းနှိုင်းယှဉ်မိသလိုဖြစ်နေရော။ သူ့အိပ်ယာပေါ် ပစ်လှဲလိုက်ပြီးနောက် ခြေအိတ်တွေ ရှူးဖိနပ်တွေကို ကြမ်းပြင်ပေါ် သူကန်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်လေ။
‘ထားလိုက်စမ်းပါကွာ….ကျုပ်သက်သောင့်သက်သာနေပါရစေ။ ဘာလဲ ကိုယ့်အခန်းထဲကိုယ် ဖိနပ်တွေ ရှူးတွေဒီလိုမချွတ်ရ တော့ဘူးလား?’
‘အာ…ဟုတ်ပါတယ်…ဆောရီး…ငါ ဒီကိုလိုက်လာတာ လိင်ကိစ္စအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာအောင်ပြောမလို့ပါကွ’
‘ကဲ ဒါဆိုလည်း မင်းပြောလက်စကို ဆက်ပြော’ သူ ခုတင်ပေါ်မှာ တစ်ဖက်လှိမ့်လိုက်ပြီး စားပွဲပေါ်က သူ့Laptop computer ကိုဆွဲယူ လိုက်တယ်ဗျ။ သူပြောတုန်းက ဂရုမထားမိတဲ့ သူ့ကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ဂျင်းဘောင်းဘီခပ်ကြပ်ကြပ်ထဲမှာ ဖုဖောင်းအိစက်စွာတွေ့ လိုက်ရတယ်။ ခပ်လျောလျောဖြစ်နေတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ ခါးအစပ်က အမြှောင်းလေးက …အာ…ကျွန်တော် ခေါင်းကိုရမ်းလိုက်ပါရဲ့။ ခပ်ကဲကဲ ငနဲတွေကို ကြည့်ရင်း ဘာမှန်းမသိ စိတ်ထန်လာတာ အခုဖြစ်ရပြန်ပြီ။
‘ဒီမှာ ခင်ဗျား အသင်းဖော်တွေထဲက တစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြစရာရှိတယ်’ သူ ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ ခုတင်အစပ်ကိုတိုးလာပါ တယ်။
သူ ဖိုင်အနည်းငယ်ကိုဟိုသည်ဖွင့်ရှာနေတယ်။ အာ…သူနဲ့ကျွန်တော် နီးကပ်လွန်းပြန်တော့ သူ့ကိုယ်ငွေ့နွေးနွေးဟာ ကျွန်တော့်အနား ကို ရိုက်ခတ်နေသလိုဖြစ်ရော။ သူ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ကလစ်နှိပ်ပြီး စဖွင့်လိုက်တယ်။ တော်တော်ရင်းနှီးတဲ့အသံက ကျွန်တော့်ကို အတွေး ကမ္ဘာထဲကဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပုံရိပ်နှစ်ခုကို မြင်ရတယ် ပေါ်လာတယ်လေ။ သူတို့ဘာတွေပြောနေလဲ ကျွန်တော်မပြော နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နည်းနည်းကြီးတဲ့ ပုံရိပ်ရှင်က တော်တော်ရင်းနီးတာပဲ။ အနီးကပ်ပုံရိပ်ပေါ်လာတော့ ကျွန်တော် ဆတ်ကနဲတုန်ကာ လန့်သွားရပါတယ်။ သေချာသွားအောင် မော်နီတာနား နောက်တစ်ကြိမ်တိုးကပ်ကြည့်မိပါရဲ့။ ဒါ ဒါ….ပီတာကြီးဗျ!! ကျွန်တော်ယုံတောင် မယုံနိုင်ဘူး။ ပီတာကြီးဆိုတာကလွဲလို့ သိပ်တော့မသိသေးဘူး ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ…အာ…သူ့ရှေ့က ဖင်ပြောင်ကြီးက ဗီဒီယိုကင်မရာထဲ ရှင်းကနဲပေါ်လာတယ်။
ကျွန်တော် သူတို့ဘာပြောနေလည်းသဲကွဲအောင် ကွန်ပျူတာနားတိုးကပ်ကာ နားထောင်မိပါတယ်။ အသံတွေက ခပ်ရှင်းရှင်းမကြား ရပေမယ့် ပီတာကြီး သူ့အ၀တ်တွေစချွတ်တာကိုမြင်လိုက်ရပါရော။ နှစ်ယောက်သား အိပ်ယာပေါ်လဲကျသွားကြတယ်ဗျ။ ယောက်ျား ပီသ တောင့်ဖြောင့်သော မိန်းကလေးတွေရဲ့အသည်းကျော် ပီတာရဲ့ ငပဲကြီးကို ဆံပင်ခပ်နက်နက်နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်က -ုပ်ပေးနေ ပြန်တယ်။
ကျွန်တော် ဆက်ပြီးကြည့်တော့မကြည့်ချင်ပါဘူး စပိုင်လုပ်နေသလိုခံစားရတယ်လေ။ နှစ်အတော်ကြာကြာကတည်းက ပီတာ အ၀တ်မပါ တာကို ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ဒါပေမဲ့ အခုလိုမြင်ရပြန်တော့ စိတ်ထဲမှာ မရိုးမရွခံစားရသလိုပါပဲ။ ငနဲတစ်ပွေနဲ့ဆုံပြီး သာယာနေတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဖြစ်အင်ကိုငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ အကုန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ကွင်းကျယ်မမြင်ရပေမယ့် Screen ပေါ်ကပေါ်သမျှ သေချာပြူးပြဲကြည်ရတာပေါ့။ ပီတာ ကြည့်ရတာ တကယ်နှစ်ခြိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်တစ်ခုကို ပြုလုပ်နေသလိုမျိုးပဲဗျ အလားတူ ကျွန်တော့်ပေါင် ကြားက ညီဘွားကလည်း ခေါင်းတငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့။ အခြားလူရှိနေတာကို ရောင်ရမ်းပြီး ပေါင်ခြံကို တစ်ချက် ကျွန်တော်ကုတ်လိုက်မိသေး တယ်။
မျက်တောင်တစ်ချက်ခပ်ပြီး screen ကိုပြန်အကြည့်မှာတော့ မြင်ကွင်းကပြောင်းသွားပြီ။ ခုတင်စောင်းမှာ လက်ထောက်ပြီး ခပ်ကုန်းကုန်း လုပ်နေတဲ့ ငနဲနောက်မှာ ပီတာဝင်ရပ်လိုက်ပြီး သူ့ငပဲကြီးနဲ့ ကလိနေတယ်။ အာ…ပီတာ့ ဟာကြီးက မသေးဘူး အကြီးကြီးပဲဗျာ။ သူတို့ ဘာတွေပြောနေကြတယ်တော့ သေချာမကြားရဘူး။ ကျွန်တော် အသေအချာကြားနေရတာကတော့ ပီတာရဲ့ ၀မ်းခေါင်းသံပါ ညည်းညူ သံနှင့်အတူ သူ့တင်သားဆိုင်တွေကို ကျစ်ကျစ်ပြီးဆောင့်နေတာကိုပဲမြင်ရတယ်။ မသိမသာ ကျွန်တော့်ဘောင်းဘီအပါးပေါ်ကနေ ငပဲကို အသာအယာပွတ်သပ်မိပါရဲ့။ ဗီဒီယိုကို အာရုံစိုက်တာများပြီး မသိစိတ်နဲ့အတူ လက်ကရောက်ရောက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ငပဲက တော်တော့်ကိုမာတောင့်ပြီးထောင်နေပြီ သိသိသာသာကိုဖြစ်နေတာ။ သူငယ်ချင်းကြီး စက်သေနတ်ပစ်တဲ့အတိုင်း ရှေ့ကငနဲကို အသားကုန်ကျွေးနေတာကိုကြည့်ရင်း စိတ်ထန်သထက်ထန်လာတယ်ဆိုပါတော့။ တစ်ချက် တစ်ချက် ရှေ့ကငနဲရဲ့ မိန်းမောသံ အော်ညည်းသံကိုကြားရပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း အဲ့လိုငနဲမျိုးကို အသားကုန်အော်အောင်လုပ်နိုင်မလားဘဲ။ အိုး….ပီတာ ခန္ဓာကိုယ် ဆတ်ကနဲတုန်သွားသလို ပါးစပ်က ‘အာ…..အ…Shit!!’ ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ သူ့ဆီးစပ်နဲ့ ရှေ့ကငနဲတင်ပါးတွေကပ်ကပ်သွားတယ်။ ဒီတစ်ခါ တော့ အသေအချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားလိုက်ရတာက ‘AHH ….Fuck Me!! မချွတ်နဲ့အတွင်းထဲမှာပဲပြီးလိုက်’ဆိုတဲ့အသံ။
အခုမှ ပီတာက သူ့ဖင်ထဲပန်းထည့်နေတာလား….ဖင်ထဲပန်းထည့်တဲ့ ခံစားချက်ကို ဘာကြောင့်ကြိုက်ပြီးတောင်းဆိုရတာပါလိမ့်။ ကျွန်တော့် စိတ်တွေ တကယ်ထန်နေပြီ ဘယ်လိုမှထိန်းမရတော့ဘူးဗျာ 4th of July ဒုံးပျံကြီးအတိုင်းပါပဲ။ ဗီဒီယိုက ပီတာနဲ့ ရှေ့ကငနဲ အိပ်ရာပေါ်ပစ်လှဲပြီး အမောဖြေတာနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်။ ခဏနေတော့ ပီတာ အိပ်ရာပေါ်ကနေဆင်းသွားရော။ အိပ်ရာပေါ်က ငနဲ က ပျော့ဖတ်ဖတ်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ငပဲကြီးတရမ်းရမ်းနဲ့ကင်မရာရှိရာကို လှမ်းလာတာမှာ သူ့ဗိုက်သားနဲ့ဆီးခုံပေါ်ဝယ် သုက်ရည်တွေက ဖွေးနေပါရဲ့။
အိပ်ရာပေါ်တစောင်းလှဲနေတဲ့ အမည်မသိသူကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီး ‘ဒါ ဒါ ငါ့သူငယ်ချင်း ပီတာ တကယ်ကြီးလာ?’ မေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော် သိတော့သိပေမယ့်လည်း သေချာအောင်ပြန်မေးတဲ့အသွင်နဲ့မေးမိခြင်းပါ။
‘အင်းဟုတ်တယ်….ကျုပ်နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ သူ့-ီးကိုညှပ်ပြီးဆွဲ-ုပ်တာ အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့….အခြား ခင်ဗျားသူငယ်ချင်းလေးယောက် လောက်ကလဲ အဲ့လိုပြောကြတာပဲ။ သူတို့နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုတွေရှိသေးတယ် ခင်ဗျားကြည့်ချင်ရင်ပြမယ်လေ’ သူ ကျွန်တော့်ကိုပြုံး ကြည့်ပြီးပြောတယ်။ အာ….ကျွန်တော့်စိတ်ထဲကခံစားချက်တွေကို မထိန်းနိုင်ဘဲ တစ်ဘက်သားရိပ်မိသွားရလောက်အောင်ဖြစ်ပျက်တာ ပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲ။ သူ ကျွန်တော့်စိတ်ကို အငိုက်ဖမ်းနိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြားကငပဲကြီးကလည်း အဲ့ဒီသတင်းပေးချက်က မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံနေတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက ဝေခွဲမရ ဟိုသည်ဖြစ်မိသလို နှာစိတ်ကလည်းထန်နေတဲ့အပြင် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေက ဘာကြောင့်မပြောပြခဲ့တာလဲ ဒေါကန်သလိုလဲဖြစ်မိပါရော။ ဒါပေမဲ့ နည်းမှားလမ်းမှားပဲပြောပြော သူတို့လိုပဲ ထန်နေ တဲ့စိတ်ကိုလျော့ချင်နေသလား?
ကျွန်တော် ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ဆန်းစစ်နေစဉ်မှာပဲ မတ်ထောင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို လက်တစ်ဘက်က ဆုပ်ကိုင်လိုက်တာကို ခံစား လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ကို တည့်တည့်ကြည့်တော့ သူက ခနဲ့တဲ့တဲ့ပြုံးပါရော။
‘ခင်ဗျား ဘာပြောတယ်ဆိုတာ ကျုပ်သိတယ်…ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားကြည့်ရတာ လက်သမားလုပ်နေရတာကိုပိုသဘောကျနေပုံပဲ’ အာ…သူ ကျွန်တော့် ငပဲကိုဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ အထက်အောက်ပွတ်သပ်ပေးရင်း အခြားလက်တစ်ဖက်က အိပ်ယာပေါ်ကိုထိုင်ချလိုက်ဖို့ ညွှန်ပါတယ်။ အဲ့တော့လည်း ကျွန်တော် အိပ်ယာပေါ်လှဲလိုက်ပေမယ့် ခြေထောက်တွေကတော့ တွဲလောင်းချထားဆဲ။
ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီဇစ်လေးကို သူဆွဲဖွင့်လိုက်တော့ ဆတ်ကနဲဝင်လာတဲ့ လေအေးအေးကိုခံစားလိုက်ရတဲ့ ဖီလင်က ကြက်သီးထမိ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တွေးထင်နေတာတွေကို စက္ကန့်ပိုင်းလောက်တော့ရပ်တပ်လိုက်ပါရဲ့။ ဒါ..ဒါ ကျွန်တော် လိုချင်နေတာ လုပ်ချင်နေ တာအမှန်ပဲလား? အာ…သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ သွေးသားစက်ယှက်ခွင့်ပေးလိုက်ရတော့မှာလား?
‘ရှီး….အ’ငပဲခေါင်းကို ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ လျှာဖျားလေးက ရစ်ပတ်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေနဲ့ဝန်းရံလိုက်တာကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။
ခပ်ကုန်းကုန်း ဖြစ်နေတဲ့ သူ့တင်သားဆိုင်တွေက တကယ်…အာ….ရှီး…ဖြေးဖြေး…အ။
Alex Aung (19 Nov 2014)